China Needle Roller Bearings mpanamboatra sy mpamatsy |Xinri
Ny fanjaitra-roller bearings dia misy rollers cylindrical izay kely ny savaivony raha oharina amin'ny halavany.Ny profil-roller / hazakazaka novaina dia manakana ny tampon'ny adin-tsaina hanitarana ny fiainan'ny serivisy.
Ny XRL dia manome fanjaitra-roller bearings amin'ny endrika maro samihafa, andian-dahatsoratra ary amin'ny habe isan-karazany, izay mahatonga azy ireo ho mety amin'ny toe-javatra sy fampiharana isan-karazany.
1. Ny fanjaitra-roller bearings dia mirindra amin'ny rafitra, kely ny habeny ary avo amin'ny fihodinana marina, ary afaka mitondra enta-mavesatra axial rehefa mitondra enta-mavesatra avo lenta.Ary ny endrika firafitry ny vokatra dia isan-karazany, malalaka adaptability, mora ny hametraka.
2. Ny fanjaitra mitambatra-roller mitondra dia ahitana ny centriole fanjaitra-roller sy manosika baolina feno, na manosika baolina, na cylindrical-roller, na zoro fifandraisana baolina, ary afaka mitondra unidirectional na bidirectional axial entana.Izy io koa dia azo natao araka ny fepetra ara-drafitra manokana ataon'ny mpampiasa.
3. Ny fanjaitra fanjaitra mitambatra dia ampiasaina ao amin'ny lalan'ny làlam-pamokarana izay misy ny tsipika mifanentana, izay misy fepetra sasany momba ny hamafin'ny tariby.
Ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana milina, milina metallurgy, milina lamba sy milina fanontam-pirinty ary fitaovana mekanika hafa, ary mety hahatonga ny famolavolana rafitra mekanika ho mora kokoa sy dexterous.
teo aloha: Fanondrahana Ball Bearings
Manaraka: Fitondran-roller cylindrical